Izindaba - Ezingezelukiwe: I-Textile Yekusasa!
Okungeluki: Indwangu Yesikhathi Esizayo!
Igama elithi nonwoven alisho “aluka” noma “alukiwe”, kepha indwangu ingaphezulu kakhulu. Okungalukiwe isakhiwo sendwangu esikhiqizwa ngqo kusuka kumicu ngokubopha noma ukuxhumanisa noma zombili. Ayinaso isakhiwo sejometri esihleliwe, kunalokho ingumphumela wobudlelwano phakathi kwefayibha eyodwa nenye. Izimpande zangempela zama-nonwovens kungenzeka zingacaci kepha igama elithi "izindwangu ezingalukiwe" laqanjwa ngo-1942 futhi lavezwa e-United States.
Izindwangu ezingalukiwe zenziwa ngezindlela ezi-2 eziyinhloko: ziyasuswa noma ziboshiwe. Indwangu engalukiwe ekhiqiziwe ikhiqizwa ngokubeka amashidi amancane, bese kufakwa ukushisa, umswakama nengcindezi yokuncipha nokucindezela imicu ibe yindwangu ebunjiwe engeke idabuke noma ibulale. Futhi kunezindlela ezi-3 eziyinhloko zokukhiqiza izindwangu ezingezona ezilukiwe: I-Dry Laid, i-Wet Laid & Direct Spun. Enqubeni yokukhiqiza Indwangu Engavukiwe Eyomile, iwebhu yemicu ibekwa esigubhini bese kufakwa umoya oshisayo ukuhlanganisa imicu ndawonye. Enqubeni yokukhiqiza Indwangu Engavukiwe Emanzi, i-web of fibers ixubene ne-solventing ethambile ekhipha into efana ne-glue ehlanganisa imicu ndawonye bese iwebhu ibekwa ukuze yome. Enqubeni yokukhiqiza Indwangu Engavukiwe yeDirect Spun, imicu iphothwa ibhande lokudlulisa bese okunamathiselwe kufuthiselwa ezintanjeni, okucindezelwa ukuthi kuboshwe. (Uma kwenzeka kunemicu ye-thermoplastic, i-glue ayidingeki.)
Nomaphi lapho uhleli khona noma umile khona manje, vele ubheke ngapha nangapha bese uthola ukuthi indwangu okungenani eyodwa ayilukanga. Izindwangu ezingasetshenziswanga zingena ezimakethe ezahlukahlukene ezibandakanya ezokwelapha, izembatho, ezezimoto, ukuhlunga, ukwakhiwa, ama-geotextiles kanye nokuvikela. Usuku nosuku ukusetshenziswa kwendwangu engalukwanga kuyanda futhi ngaphandle kwabo impilo yethu yamanje ibingaqondakali kangako. Ngokuyinhloko kunezinhlobo ezi-2 zendwangu engalukiwe: Okuhlala isikhathi eside nokulahlwa. Cishe ama-60% endwangu engalukiwe aqinile futhi ukuphumula okungu-40% sekulahliwe.
Bambalwa Ukuqamba Embonini Engavukiwe:
Imboni Engalukiwe ihlale ithuthukiswa ngezinto ezidinga isikhathi futhi lokhu kuyasiza nasekuqhubekiseni phambili amabhizinisi.
I-Surfaceskins (i-Nonwovens Innovation & Research Institute- NIRI): Kuyisango elicindezela amagciwane kanye nokudonsa izibambo ezenzelwe ukubulala amagciwane namabhaktheriya abekiwe phakathi kwemizuzwana ebalulekile, phakathi komsebenzisi oyedwa nomunye olandelayo odlula emnyango. Ngakho-ke kuyasiza ukuvimbela ukusabalala kwamagciwane namagciwane phakathi kwabasebenzisi.
I-Reicofil 5 (Reifenhäuser Reicofil GmbH & Co KG): Lobu buchwepheshe buletha ubuchwepheshe obukhiqiza kakhulu, obunokwethenjelwa nobusebenzayo obunciphisa izingcezu ezilukhuni ngamaphesenti angama-90; kwandisa okukhipha kufika ku-1200 m / min; yenza lula isikhathi sokugcinwa; kunciphisa ukusetshenziswa kwamandla.
I-Remodeling ™ Compound Hernia Patch (i-Shanghai Pine ne-Power Biotech): I-electro-spun nano-scale patch ebiza kakhulu ukufakelwa kwebhayoloji engabizi kakhulu futhi isebenza njengendawo yokukhulisa amaseli amasha, ekugcineni i-biodegrading; ukunciphisa izinga lezinkinga zangemva kokuhlinzwa.
Isidingo Somhlaba Wonke:
Ukugcina cishe isikhathi sokukhula esinganqamuki eminyakeni engama-50 edlule, okungalukiwe kungaba ingxenye yokuphuma kwelanga yemboni yendwangu yomhlaba enenzuzo ephezulu kunanoma yimuphi omunye umkhiqizo wezindwangu. Imakethe yomhlaba wonke yendwangu engalukiwe iholwa yiChina enesabelo semakethe esiseduze kwama-35%, kulandelwa iYurophu ngesabelo semakethe cishe esingu-25%. Abadlali abahamba phambili kule mboni yi-AVINTIV, iFreudenberg, iDuPont ne-Ahlstrom, lapho i-AVINTIV ingumkhiqizi omkhulu kunabo bonke, enesabelo semakethe yokukhiqiza cishe esingu-7%.
Esikhathini sakamuva, ngokukhuphuka kwamacala e-COVIC-19, ukufunwa kwenhlanzeko nemikhiqizo yezokwelapha eyenziwe ngendwangu engalukiwe (njengokuthi: amakepisi okuhlinza, amaski wokuhlinza, i-PPE, iphinikhodi yezokwelapha, izembozo zezicathulo njll) kukhuphuke kwaya ku-10x kuya 30x emazweni ahlukene.
Ngokusho kombiko wesitolo esikhulu somhlaba wonke sokucwaninga ngezimakethe “Research & Markets”, imakethe yeGlobal Nonwoven Fabrics yabalelwa ku- $ 44.37 billion ngo-2017 futhi kulindeleke ukuthi ifinyelele ku- $ 98.78 billion ngo-2026, ikhule ku-CAGR ka-9.3% ngesikhathi sesimo sezulu. Kucatshangwa futhi ukuthi imakethe ehlala njalo engalukwanga izokhula ngezinga eliphakeme le-CAGR.
Ama-nonwovens asungula izinto ezintsha, adala izinto eziningi, ubuchwepheshe obuphakeme, uyakwazi ukuzivumelanisa nezimo, ubalulekile futhi uyabola. Lolu hlobo lwendwangu lukhiqizwa ngqo kusuka kumicu. Ngakho-ke asikho isidingo sezinyathelo zokulungiselela intambo. Inqubo yokukhiqiza ifushane futhi kulula. Lapho kukhiqizwa khona amamitha ayizi-5,00,000 endwangu elukiwe, kuthatha izinyanga eziyisithupha (izinyanga ezi-2 ukulungiselela intambo, izinyanga ezi-3 ukwelukwa ku-50 looms, inyanga engu-1 yokuqedela nokuhlola), kuthatha izinyanga ezi-2 kuphela ukukhiqiza inani elifanayo Indwangu engalukiwe. Ngakho-ke, lapho isilinganiso sokukhiqizwa kwendwangu ephothiwe siyimitha elilodwa / iminithi kanti izinga lokukhiqizwa kwendwangu ebunjiwe lingamamitha amabili / iminithi, kepha izinga lokukhiqizwa kwendwangu engalukiwe imitha elingu-100 / iminithi. Ngaphezu kwalokho izindleko zokukhiqiza ziphansi. Ngaphandle kwalokho, indwangu engalukiwe ekhombisa izakhiwo ezithile njengamandla aphakeme, ukuphefumula, i-absorbency, ukuqina, isisindo esincane, ukubambezela amalangabi, ukulahlwa njll. Ngenxa yazo zonke lezi zici ezinhle, umkhakha wendwangu uqonde ezindwangu ezingalukiwe.
Indwangu engalukiwe ivame ukushiwo ukuthi iyikusasa lomkhakha wezindwangu njengoba isidingo sabo somhlaba wonke nokwenza izinto ezihlukahlukene kukhuphuka kuya phezulu.
Isikhathi sokuthumela: Mar-16-2021